Koomiishanka Doorashooyinka Qaranka Oo Ku Dhawaaqay Xiliga La Bilaabaayo Kaadh Bedelka Iyo Bixinta Kaadhadhkii Lumay + Shuruudo Cusubna Soo Saaray – Great Banaadir
Hargeysa (SOLNA) – Koomiishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland ayaa ku dhawaaqay xiliga la bilaabaayo Kaadhadh Bedelka Degmo Doorashooyinka iyo sidoo kale Bixinta Kaadhadhkii lumay.
Guddoomiyaha Koomiishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland Md Cabdirashiid Maxamuud Riyo Raac ayaa sheegay in 15 bishan la bilaabi doono Kaadhadh Bedelka iyo sidoo kalena Bixinta Kaadhadhkii dadka ka lumay, iyada oo hawshaas laga bilaabi doono 23-ka degmo doorasho ee dalka oo dhan.
Waxa uu sidoo kale sheegay Guddoomiye Cabdirashiid Riyo Raac in dadkii wixii ka dambeeyey sannadkii 2016-kii guur guuray ay ugu talo galeen Fursadda Kaadhadhka lagu bedelaayo, isla markaana loo bedelaayo degaanadooda ay degan yihiin waqtigan, waxaanu tilmaamay in lagu xidhi doono Shuruudo dadka uu Kaadhka Codbixintu ka lumay iyo ka loo bedelaayo.
Waxaana kamid noqon doona Shuruudaha lagu xidhaayo dadka Kaadhka loo bedelaayo , Shuruudahan soo socda:-
1) Inuu qofku joogo goobta uu u bedelanaayo.
2) Inuu tago xarunta ugu dhow ee shaqadaasi ka socoto.
3) Inuu qaato Kaadhkiisii hore si looga bedelo kaadhkaas.
4) nuu buuxiyo Foomka Codsiga ee goobtaas yaalla.
5) Inuu caddeeyo sababta uu degmada cusub ugu soo guuray.
Waxa sidoo kale jiri doona Shuruudo lagu xidhi doono qofka uu Kaadhku ka lumay oo noqon doona:-
1) Inuu qofku tago goobta ugu dhow ee hawshu ka socoto.
2) Inuu Foomka buuxiyo.
3) Inuu ku Dhaarto inuu kaadhkii ka lumay.
Waxaanu Koomiishanka Doorashooyinka Somaliland ku wargeliyey shacabka Reer Somaliland in bishan labaad 15-keeda ay 120 goobood oo dalka ah ka bilaabmayso Hawsha Kaadh Bedelka Degmo Doorasho iyo Bixinta Kaadhadhkii Lumay, iyada oo shaqadaasi socon doonto muddo 10 cisho ah iyo 4 maalmood oo lagu dari doono 6 caasimadood ee goboladda dalka.